Tantaran’ny Tsonamia Nampivarahontsana Tao Tohoku, Voadika Ho Teny Anglisy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Desambra 2014 3:03 GMT
Vakio amin'ny teny Français, polski, Español, 日本語, English
Sary natolotr'i Kahoku Shimpo
Ao anaty ezaka iray ho fanapariahana ny fanentanana momba ireo “loza telo nahatsiravina” tao Tohoku, Japana, nahafatesana olona maro tamin'ny 11 Martsa, ary mba hanampiana ny olona manerana ny tany ho tsara omana amin'ny tranga tahàka izany amin'ny hoavy, navoakan'ny gazety an-tsoratra iray goavana ao Tohoku ho amin'ny teny Anglisy ny fandrakofany azy iny.
Ilay tetikasa dia fiaraha-miasan'ny gazety Kahoku Shimpo sy ireo mpianatra mpirotsaka an-tsitrapo ary ny sekoly ambony ao amin'ny Anjerimanontolon'i Harvard any Cambridge, Massachusetts.
Hideya Terashima, mpanolotra amin'ny TEDx, no manonta ny Kahoku Shimpo, ary ny foiben-toerany dia ao Sendai, prefektioran'i Miyagi. any amin'ny anjatony kilaometatra maro avaratr'i Tokyo amin'ny morontsiraky ny ranomasimbe Pasifika, Iray amin'ireo tanàn-dehibe midadasika indrindra any amin'ny faritr'i Tohoku avaratra Atsinanan'i Japana i Sendai. Samy niantraika tamin'ity tanàna ity daholo na ny horohorontany tamin'ny 11 Martsa 2011, na ny tsonamia goavana naterany (fanamarihana: tsonamia, ilazana ny onja vaventy mitondra faharavàna, ateraky ny horohorontany any ambanin'ny ranomasina).
Tsy hoe nandrakitra fotsiny ny taorian'ny zava-nitranga tamin'izany andro izany ireo mpitatitra vaovao avy amin'ny Kahoku Shimpo; niainan'izy ireo koa ny hirifiry naterak'ireo loza vojanahary ireo.
Sary: Kahoku Shimbun
Amin'ny fiarahana niasa tamin'ny sampam-pianarana tao Harvard sy ireo mpianatra, lahatsoratra 38 avy amin'ireo andiany “Wagakoto” tao amin'ny gazety no ho avadiky ny Kahoku Shimpo ho teny Anglisy. Ny 11 Desambra 2014 no navoaka ny voalohany tamin'ireny, ary manome fitantaràna tsy manam-paharoa amin'ny teny Anglisy momba izay zava-nitranga avy hatrany taorian'ny horohorontany sy ny tsonamia:
Hôpitalim-bahoaka kelikely ihany ny Hôpitalin'i Ogatsu izay niorina tao amin'ny tanànan'i Ishinomaki, prefektioran'i Miyagi, akaikin'ny ranomasimbe Pasifika. Zokiolona mponina tao an-tanàna no ankamaroan'ìreo narary tao.
Ny 11 Martsa 2011, tratry ny tsonamia izay tafakatra avo nihoatra ny tafony ilay hôpitaly, 10 metatra ny haavony. Tra-doza tamin'ilay tsonamia daholo na ireo marary 40 notsaboina tao, na ny 24 tamin'ireo 30 mpiasan'ny hôpitaly.
Tamin'izany andro izany, niezaka ny nanavotra marary iray ho eny amin'ny tafon'ny trano i Yoshikatsu Endo (47 taona) mpiandraikitra ny hôpitaly sy ireo mpiara-miasa taminy, talohan'ny niteleman'ny tsonamia azy ireo.
“Marobe no maty, nefa avotra aho. Tena maharary ny mieritreritra izay mety ho nolazain'izy ireny tamiko, ‘Nahoana izahay no nilaozanao?’”
Avy amin'ny sasinteny/ Arovy ny Aina Sy Ny Vondrom-piarahamonina [Eng] – Prologue/ Preserve Lives and Communities
Hatreto ny voadika ho teny Anglisy dia ahitàna ny :
Mbola betsaka ny ho adika sy ho avoaka ato anatin'ny herinandro sy volana vitsivitsy ho avy.
“Hatramin'ny fotoana namelezan'ilay loza voajanahary tamin'ny 11 Martsa 2011, ireo mpitatitra vaovao sy mpamoaka lahatsoratra ary ny mpitantana ao amin'ny Kahoku Shimpo dia tsy nikely soroka niasa hitahiry an-tsoratra iny loza iny sady koa hanome loharanom-pahatsiarovana an'ilay loza no sady hampita ireo lesona azo taminy ho an'ireo taranaka any aoriana,” hoy i Andrew Gordon, mpampianatra tantara ao amin'ny “Lee and Juliet Folger Fund” any Harvard.
“Nanomboka vetivety monja taorian'ilay loza, ireo mpiara-miasa, mpitantana ary mpianatra tao amin'ny Reischauer Institute of Japanese Studies ao amin'ny Anjerimanontolon'i Harvard dia nanomboka niaraka niasa tamin'ireo fikambanana marobe mba hanangana loharanon-drakitra ho fiarovana sy hanamoràna ny fahazoana ireo angon-drakitra amin'izao fotoana izao sy rahatrizay momba ity loza nahatsiravina ity ary ny vokany.”
Tanatin'ny volana sy taona maro taorian'ilay loza, miteny i Gordon fa nanefy fiaraha-miombon'antoka matanjaka niaraka tamin'ny Kahoku Shimpo ireo mpianatra sy ny sampam-pianarana ao Harvard mba hampisy ny dikanteny amin'ny teny Anglisy amin'ireo tantara mahavaky fo niainan'ny vahoaka nandritra ny loza voajanahary tamin'ny Martsa 2011.